प्रदेश नं ७ मा मतदान शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न « News24 : Premium News Channel
प्रदेश नं ७ मा मतदान शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न
धनगढी । प्रदेश नं ७ मा प्रदेश र प्रतिनिधीसभा निर्वाचनको मतदान शन्तिपूर्ण रुपमा बिहिबार सम्पन्न भएको छ ।
दोश्रो चरणको निर्वाचन अन्तरगत डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र डडेलधुरा जिल्लामा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान सम्पन्न भएको सम्वन्धीत जिल्लाका जिल्ला शुरक्षा समितिहरुले जनाएका छन् ।
बिहान ७ बजे देखि बेलुकी ५ बजे सम्म मतदाताहरुले उत्साहका बिच मतदान गरेका थिए । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृत मोहन प्रशाद अर्यालका अनुसार कैलाली जिल्लामा ६५ प्रतिशत मतदान भएको छ । कञ्चनपुर जिल्लामा ६८ प्रतिशत मतदान भएको छ । डडेलधुरा जिल्लामा ६५ प्रतिशत, अछाम जिल्लामा ५८ प्रतिशत र डोटीमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
मत पेटीकाहरु धमाधन ओर्साने कार्य भैरहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय उप प्रशासक शंकर बिष्टले बताए । उनले भने,भोली बेलुकी सम्म सबै मतदान केन्द्र र मतदान स्थलबाट मत पेटिका सदरमुकाम पु¥याई सकिने पनि उप प्रशासक बिष्टले बताएका छन् ।
डोटीमा मतदाताको मृत्यू
डोटीमा मतदान गर्न जानेक्रममा एकजना बृद्धा महिलाको मृत्यु भएको छ ।. खापरमाण्डौं आधारभुत विद्यालय कोटसलेना रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जानेक्रममा पुरर्वीचौकी गाउँपालिका–७ तिमुरदहकी ७५ वर्षीया मुनादेवी कामीको मृत्यु भएको हो ।.
मृतक महिला दमको रोगी भएकाले उकालोबाटो हिड्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलयले डोटीले जनाएको छ ।.
२० वर्षीया मोडल मानुसीको हत्या, सुटकेसमा खाँदेर झाडीमा फालिएको अवस्थामा भेटियो शब ! 260700
अशोभनीय अभिव्यक्ति नदिन पूर्वराजालाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी 258340